Caalamka Online » WAR DEG DEG AH: Taabit Oo Dajiyay qorsho uu ku kala Furdaaminayo Documenta kaga xaraysan Xarunta Dowlada Hoose ee ciidanku la wareegay
WAR DEG DEG AH: Taabit Oo Dajiyay qorsho uu ku kala Furdaaminayo Documenta kaga xaraysan Xarunta Dowlada Hoose ee ciidanku la wareegay
January 22, 2018 - Written by Khaliif - Edited byKhaliif
Gudoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed ayaa caawa ka hadlay xilka qaadistii lagu sameeyay.
Thaabit ayaa marka hore sheegay inuu aqbalay xilka qaadistii uu saakay ku sameeyay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C.laahi Maxamed Farmaajo, si nabad ahna uu xilka u wareejiyo, uuna magacaabi doono guddi ka shaqeeya Munaasabadda xil wareejinta.
Wuxuu sheegay khilaafka beryahan taagnaa inuu ka dhashay laba arrimood oo kala ah xasiloonida iyo nabadgelyada Gobolka Banaadir iyo shirka wadatashiga Nabadeynta iyo horumarinta gobolka Banaadir oo looga hadli lahaa maqaamka Muqdisho.
Sidoo kale, Thaabit ayaa Guddoomiyaha cusub ee Gobolka Banaadir Eng. Yariisow ugu hambalyeeyay xilka cusub, wuxuuna ku baaqay in xayiraadda laga qaado xarunta Aqalka Dowladda Hoose, isaga oo shacabka ka dalbaday inay ka shaqeeyaan nabadgelyada.
Waxa uu dalbaday In Ciidamada Amaanka meesha laga saaro, xaruntane sidii hore lagu soo celiyo, Maadaama hada ay gacanta ku hayaan Ciidamo ka tirsan nabad suguda iyo Militariga gaar ahaan kuwa Koofi Casta ee Madaxtooyada.